Sistemụ faịlụ: nke ị ga-ahọrọ maka diski m na nkebi na Linux? | Site na Linux
Sistemụ faịlụ: nke ị ga-ahọrọ maka diski m na nkebi na Linux?
Ugbu a, Sistemụ arụmọrụ free na-emeghe dabeere na GNU / Linux kwado a dịgasị iche iche nke Sistemụ faịlụ (faịlụ), ọ bụ ezie na ikekwe nke kacha mara amara na / ma ọ bụ jiri ya, ọ ka bụ nke dị ugbu a TBỌCH4 XNUMX.
Ma n'ezie: Kedu ihe kwesịrị ịbụ nke kachasị adaba maka ojiji anyị na-enye nkewa, Diski, Sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ Kọmputa? Olee uru na ọghọm mmadụ nwere karịa ibe ya?
Dị ka anyị na-ama kwuru tupu, ndị kasị ọtụtụ ebe ada na mara puru omume Usoro faịlụ banyere GNU / Linux, bụrụ nke dị ugbu a TBỌCH4 XNUMX. Nke a bụ n'ihi:
"... el Extended file system (EXT), bụ faịlụ sistemụ izizi emere maka Linux Operating System. Ezubere ya site na Rémy Card iji merie ikike nke MINIX File System. Ọ bụ nke EXT2 na Xiafs, bụ nke otu asọmpi, nke ext2 meriri, mechara merie ya, n'ihi ịdị ogologo oge ya.".
Nke ahụ bụ, Wepu faịlụ EXT, ị fọrọ nke nta ka nwere 30 afọ na-agbanwe. Site na mbipụta 1 na 1992, na-aga na nke ya mbipụta 2 na 1993, ya mbipụta 3 na 2001, ruo n'oge a Usoro faịlụ TBỌCH4 XNUMX ewepụtara ya n'afọ 2008. Ka ọ dị ugbu a, site mgbe ahụ gawa, ọtụtụ sistemụ Njikwa ndị ọzọ ahụla ndụ dị ka ihe ọzọ na nke ugbu a TBỌCH4 XNUMX ya na agwa di iche na ndi iche.
1 Sistemụ faịlụ na GNU / Linux
1.1 TBỌCH4 XNUMX
1.4 Ndị ọzọ na-erughị ala ma ọ bụ mara
Sistemụ faịlụ na GNU / Linux
Ọzọ anyị ga-ahụ njirimara kachasị dị iche iche nke ọ bụla, ka ị wee nwee ike ịhụ nke kachasị adaba n'ọnọdụ ọ bụla.
E wepụtara ya na 2008.
Aha ya na-anọchi anya usoro faịlụ anọ.
Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ochie EXT3 ọ dị ngwa ngwa, ya bụ, ọ nwere mmụba na ọsọ ọ na-agụ na ịde ihe, ọ naghịkwa enwe ike ibe. Ọzọkwa, ọ nwere ike ijikwa nnukwu faịlụ sistemụ (ruo 1EiB = 1024PiB) na ijikwa faịlụ buru ibu (ruo 16TB). Ọzọkwa, ọ na-enye ihe ọmụma ziri ezi faịlụ ụbọchị, nwere obere CPU ojiji.
Ọ bụ nke abụọ nke usoro EXT ka ọ bụrụ Transaction File System, ya bụ, ọ nwere usoro nke na-emejuputa azụmahịa ma ọ bụ ndekọ akụkọ, n'ụzọ dị ka ịchekwa ozi dị mkpa iji weghachite data metụtara azụmahịa ahụ ma ọ bụrụ nke a dara.
O nwere nkwado "Extent". "Extent" bụ ngbanwe nke atụmatụ ngọngọ nke ọdịnala nke faịlụ faịlụ EXT 2/3. Otu "Extent" bu mkpokopu udiri ihe aru, nke na enye File File ikike ya imeziwanye oru ya na igba faili buru ibu ma belata nkewa.
Ihe ndị a na atụmatụ ndị ọzọ na-eme ka ọ dị mma maka iji kọmputa kọmputa na ndị ọrụ ụlọ ọrụ, nke na-achọghị kpụ ọkụ n'ọnụ iji sistemụ Njikwa. Njirimara ya na arụmọrụ ya zuru oke maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ na ojiji nke kọmputa nwere oke ojiji, ya bụ, ndị nkịtị. Agbanyeghị, ojiji ya na sava nwere nnukwu ọchịchọ ma ọ bụ ọrụ dịkwa mma.
Ọ nwere ọtụtụ ndị ọzọ pụtara ìhè atụmatụ, ma ndị a nwere ike-gbasaa na website nke kernel.org, na ederede pụrụ iche na weebụsaịtị openource.com.
XFS bụ nke kacha ochie n’ime akwụkwọ akụkọ na-enye akụkọ dị maka otu UNIX. Ọ bụ ụlọ ọrụ SGI (nke a na-akpọbu Silicon Graphics Inc.) mepụtara ya ma wepụta ya na 1994. Na Mee 2000, SGI wepụtara XFS n'okpuru ikike ikike mepere emepe, nke mere ka etinye ya na Linux site na mbipute 2.4.25. XFS na-akwado sistemụ faịlụ nwere ihe ruru 9 exabytes, maka 64 Bit na terabyte 16 maka 32 Bit.
XFS bụ sistemụ faịlụ nke na-etinye akwụkwọ akụkọ, yana 64-bit siri ike na nke nwere ike ịbelata. Ọ bụ kpam kpam ndọtị dabeere, ya mere ọ na-akwado nnukwu faịlụ na nnọọ nnukwu faịlụ sistemụ. Ọnụ ọgụgụ nke faịlụ nke XFS nwere ike ịnwe nwere oke naanị site na ohere dị na faịlụ faịlụ.
XFS na-akwado akụkọ metadata, nke na-eme ka mgbake ngwangwa dị ngwa. Enwere ike ịgbanye usoro faịlụ XFS ma gbasaa ebe a na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ.
Ihe ndị a na atụmatụ ndị ọzọ na-eme ka ọ dị mma maka iji sava, karịsịa nke nnukwu ọchịchọ ma ọ bụ ọrụ, nke chọrọ iji ike nke usoro faịlụ na usoro ndị siri ike karị maka mgbake nke otu na data dị. Yabụ, Servers na-ejikwa nnukwu diski na-agụ / ide ibu, standalone ụdị ọdụ data ma ọ bụ jikwaa arụmọrụ webhosting, n'etiti ngwa ndị ọzọ.
Ọ nwere ọtụtụ ndị ọzọ pụtara ìhè atụmatụ, ma ndị a nwere ike-gbasaa na website nke Redhat.com, na ederede pụrụ iche na weebụsaịtị ig.qwe.wiki.
Btrfs (B-Tree FS) bụ sistemụ faịlụ nke oge a maka Linux nke na-achọ iji mejuputa atụmatụ ndị dị elu ma n'otu oge ahụ na-elekwasị anya na mmejọ mmejọ, ndozi, na nchịkwa dị mfe.
Ọ bụ ọtụtụ ụlọ ọrụ mepụtara ya, mana enyere ya ikikere n'okpuru ikike GPL ma mepee ka onye ọ bụla tinye aka.
O nwere atụmatụ magburu onwe ya maka ijikwa nnukwu nchekwa, na maka ịchọpụta, idozi na ịnabata njehie na data echekwara na diski.
Ọ na-ejikwa nchekwa na njikọta, na-enye ya ohere ịnye nkwụnye ụgwọ na sistemụ faịlụ etinyere.
Btrfs na-eji ọrụ Copy-on-Writ (CoW) arụ ọrụ, na-enye ohere ịgụ ma ọ bụ mgbanwe snapshots, nwere nkwado nke ụmụ amaala maka sistemụ faịlụ ọtụtụ ngwaọrụ ma kwado njikwa obere olu. Na mgbakwunye, ọ na-echebe ozi (data na metadata) site na akwụkwọ nyocha (nlele), na-akwado mkpakọ, njikarịcha maka diski SSD, ịkwakọba obere faịlụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Btrfs codebase ka nọ na-aga n’ihu n’ihu iji hụ na ọ nọgidere na-adịgide adịgide ma na-adị ngwa, ma na-enwe ike ịbelata n'ọnọdụ ọ bụla. Ọsọ ọsọ mmepe ya pụtara na ọ na - abawanye ọfụma na ụdị ọ bụla nke Linux, yabụ a na - atụ aro ya nke ukwuu ka ndị ọrụ jiri kernel kachasị ọhụrụ rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ha ga - eme ya.
Ihe ndị a na atụmatụ ndị ọzọ na-eme ka ọ dị mma maka ọrụ dị elu na Worklọ Ọrụ na Sava. Ebe ọ bụ na, ọ pụtara maka ikike ya dị oke mma, ọkachasị ndị toro eto na, n'ozuzu, a na-eduzi ha karịa naanị imeziwanye arụmọrụ, ya bụ, ha lekwasịrị anya na njikwa nchekwa na nchekwa.
Ọ nwere ọtụtụ ndị ọzọ pụtara ìhè atụmatụ, ma ndị a nwere ike-gbasaa na website nke kernel.org, na ederede pụrụ iche na weebụsaịtị elpuig.xeill.net.
Ndị ọzọ na-erughị ala ma ọ bụ mara
Ezumike, GNU / Linux nwere ike ijikwa ndị ọzọ Usoro faịlụ ndị na-abụghị ụmụ amaala, maka diski na nkebi dika FAT32, exFAT na NTFS de Windows, HFS + na AFS de Apple. Sistemụ faịlụ F2FS, UDF na-esote exFAT maka mpụga ma ọ bụ flash nchekwa draịva (diski). Na maka netwọk, dị ka NFS (ejiri kee ihe omuma n’etiti igwe Linux) ma obu SMB (ịkesa akụrụngwa n'etiti Linux na Windows machines).
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Sistemas de archivos», nke anyị «Distros GNU/Linux» ịmatakwu nke bụ ihe ziri ezi maka nke anyị «discos o particiones», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Sistemụ faịlụ: nke ị ga-ahọrọ maka diski m na nkebi na Linux?
Mana echekwaghị m echiche maka ike “resize” resize partitions.
XFS na BTRFS anaghị ekwe
Ana m eji XFS na EXT4 ugbu a, uru nke XFS na-eme ka m jiri ya bụ na n'oge ọkọchị, okpomọkụ na-emetụta ya obere - m na-emebi nkewa kachasị ederede na okpomọkụ n'oge ọkọchị na ebe m gbanwere ya na XFS agaghịkwa -
Mana EXT4 maka ikike ya "ịgbanwe" na arụmọrụ ya na-adịghị anya site na ndị ọzọ meriri obi m-
Zaghachi Miguel Mayol Tur
Daalụ, Miguel. Daalụ maka okwu gị na ntinye sitere na ahụmịhe gị!
N'okwu m, ana m eji BtrFs maka mgbọrọgwụ m, yana XFS maka nkebi / ụlọ m.
Nke mbụ, ahụrụ m ike m nwere n'anya, tinyere snapper, ịlaghachi n'ọnọdụ gara aga ma ọ bụrụ na nwelite ọ bụla ma ọ bụ "fiddling" na-agahie.
Daalụ, Dhouard. Daalụ maka okwu gị na ntinye sitere na ahụmịhe gị!
Alfonso Barrios D. Onyekwere dijo
Ezigbo mbipụta mana ọ dị m ka ọ bụrụ na iwepụtara gị oge iji kọwaa uru nke sistemụ linux gasị ị nwekwara ike ịkọwapụta uru nke windo na sistemụ faịlụ apụl
Ndị ọzọ masịrị m post ahụ, edere ya nke ọma
Zaghachi Alfonso Barrios D.
Daalụ, Alfonso. Daalụ maka okwu gị. N'ezie, ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ịgụnye ha. Ọ ga-abụrịrị maka mmelite ọzọ nke post a.
Mụ nwanyị, Sọftụwia Na-akwụghị ụgwọ na Isi mmalite: Obi ụtọ 8 March!
Achọta ahụhụ na pppd nke nyere ohere ime koodu remotely dị ka mgbọrọgwụ